Khuburo Heer Caalami ah oo Bareysa Madadi Dhalisay Khilaaf Britain Iyo Russia | Puntland
Khuburo Heer Caalami ah oo Bareysa Madadi Dhalisay Khilaaf Britain Iyo Russia
Khuburo caalami ah ayaa lagu wadaa inay gaaraan dalka UK si qiimayn ugu sameeyaan nooca ay ahayd maadaada sunta ah ee neerfaha wax yeelleysa ee lagu sumeeyey basaas hore oo u dhashay dalka Ruuushka iyo gabadhiisa oo ku sugnaa magaalada Salisbury.
Koox ka socota ururka la daggaalanka hubka kiimikada ah ee magaciisa loo soo gaabiyo (OPCW) ayaa waxay booqan doonaan xarun milatari oo wax lagu baaro oo lagu magacaabo Porton Down oo ku taal deegaanka Wiltshire.
Khubaro halkaas ku sugan ayaa sheegaysa in maadada wax lagu sumeeyey ay tahay nooc lagu farsameeyey dalka Ruushka.
Madaxweyne Putin ayaa sheegay aragtida ah in Ruusku uu ku lug lahaa sumaynta ninka basaaska ahaa ay tahay mid aan la mallaysan karin.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain, Boris Johnson ayaa mar sii horraysay ku eedeeyey xukuumadda Moscow in Ruushku uu haysto maadada loo adeegsaday weeerarkii ka dhacay Salisbury.
Mr Johnson ayaa socdaal ku tagaya Brussels, asagoo dadaal ugu jira sidii uu Midowga Yurub iyo isbahaysiga NATO uga heli lahaa taageero dheeri ah oo la xiriirta mawqifka Britain.
Wuxuu sidoo kale la kulmi doonaa masuuliyiinta ururka ladagaallanka hubka kiimikada ee fadhigiisu yahay dalka Holland ee OPCW iyo baarayaal sar sare oo dhanka kiimikada ah.
Waxa casumaad u fidisay UK si ay si madax bannaan baaritaan ugu sameyaan maadada neerfaha wax yeellaysa ee loo adeegsaday weerarka, waxayna qaadan doontaa ugu yaraan labo toddobaad si ay u soo saaraan natiijooyin la xiriira arrintan.
Sergei Skripal oo 66 jir ah iyo gabadhiisa Yulia Skripal oo 33 jir ah, ayaa ku jira isbitaal iyagoo xaaladoodu ay xun tahay, kadib markii ay ka yimaadeen makhaayad ay kasoo cunteeyeen, waxaana laga helay ayagoo miyir la’ oo dul yaal kursi meel u dhow xarun laga dukaamaysto oo ku taal magaalda Salisbury.